Qulqulluu Paatriyaarikii Abbaan keenya Maatiyaas I Waggaa haaraa ilaalchisee Baga ittiin isin gahe jechuun Sagalee Eebbaa kennan – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
Qulqulluu Paatriyaarikii Abbaan keenya Maatiyaas I Waggaa haaraa ilaalchisee Baga ittiin isin gahe jechuun Sagalee Eebbaa kennan
September 10, 2015 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Qulqulluu Paatriyaarikii Abbaan keenya Maatiyaas I Waggaa haaraa ilaalchisee Baga ittiin isin gahe jechuun Sagalee Eebbaa kennan.
Eebbifamoo qulqulluu Paatriyaarik Abbaan keenya Maatiyaas Dursaa Phaaphaasota Itiyoophiyaa Dursaa phaaphaasii aksum icaggee teessoo Taklahaaymaanot har’a Phaagumee 4 galma waajjira isaanii keessatti ibsa kennaniin Uuummata Itiyoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaatti argamaniif baga nagaan bara 2008 geessani jechuudhaan sagalee eebbaa isaanii kennaniiru. Ibsa sagalee eebbaa isaanii haala armaan gadiin hiiknee dhiyeessineerra.
Sagalee Eebbaa Eebbifamoo Qulqulluu Abbaa keenya Maatiyaas I dursaa Phaaphaasota Itiyoophiyaa Dursaa Phaaphaasii Aksum Icaggee teessoo Takla Haaymaanot waa’ee Waggaa haaraa bara 2008 kennan
Biyya keenya Itiyoophiyaa keessaa baadiyyaa fi Magaala Warra jiraattan
Biyya alaa ardiilee adda addaa irra wara jiraattan
Daangaa biyyaa eeguu fi kabachiisuuf warreen daangaa irra dhaabattan
Sababa dhukkubaatiin warreen bakka tsabalaa fi Hospitaalota adda addaa keessa jirtan
Akkasumas sirreeffamtoota seeraa taatanii warreen mana sirreessaa keessa jirtan hundaaf
Uumaa barootaa kan ta’e Waaqayyo keenya baga waggaa darbe nagaan nu raawwachiisee bara 2008 bara Yohaannis isin gahe.
Hunda kan argamsiise uumaa hundaa kan ta’e Waaqayyo uumaan keenya uumama uume keessaa tokko illee uumamni faayidaa hin qabne hin jiru. Uumamni hunduu Isa biratti bareedaa fi hojii fi kaayyoo mataa isaanii kan qabanidha. ( Se.Uum.1:25)
Uumamni Waaqayyo uume dandeettii uumamaatiin guutummaa guutuutti lakkaahamanii kan xumuraman miti. Muraasa irraa kan hafe hunduma isaanii ija uumamaatiin arguun waan hindanda’amneef kitaabni qulqulluun uumama waliiti qabuudhaan jecha gabaabaadhaan yeroo ibsu “ warreen samii fi lafa irra jiran kan mul’atanii fi kan hin mul’anne” jedha ( Qol.1:15)
Warreen lafa irra jiraatanii hin mul’anne keessaa tokko bara ykn yeroodha. Yeroon gochaan beekamuu irraa kan hafe qaama ijaan argamuu fi qaqqabatamu ykn uumamam halluu addaa qabu miti.
Haa ta’u malee waan hin argamneef qofa hin jiru jechuun xumura irra gahuun ykn dubbachuun hin danda’amu. Sababiin isaas safartuu yeroo daqiiqaa irraa eegalee sa’aatiiwwan guyyoota, guyyoonnis torbanoota, torbanoonnis ji’oota, ji’oonnis waggaalee achumaan marsaalee adda addaatiin akka walitti qabe yeroo sochoosu ni agarraafidha.
Barri meeshaa hojii waan ta’eef gocha gaarii ykn hamaa yeroo tokko raawwatameen ibsama. Kana irraa kan ka’e barichi gaariidha ykn hamaadha yeroo jedhamu ni dhageenya.
Haa ta’u malee dhimma keenya bu’uuraa ta’uu kan qabu mul’achuu fi mul’achuu dhiisuu baraa osoo hin taane karaa faayidaa uumamtootaaf kennuun hubachuun fayyadamtoota ta’uuf socho’oodha.
Barri uumama addunyaa dura kan hin turre kan bara wajjin uumame; kan samiirra hin jirree fi uumamtoota lafa kanaatiif qofa akka tajaajila kennuuf uumamedha.( Se. Uum.1:14)
Osoo qabeenyi baraa hin jiru ta’ee namni jireenya isaa biyya lafaa qajeelchuu hin danda’u ture.
Kanaafuu uumamni biyya lafaa akka waliigalaatti,dhalli namaa ammo addatti jireenya isaa haala sirna qabuu fi duraa duubaan eegee hojii isaa karooraan akka gaggeessuuf qabeenyi baraa isa barbaachisa.
Kanaafuu barri hojii keenya maraaf meeshaa jalqabaa ta’ee akka nu tajaajiluuf qabeenya Waaqayyo nuuf kennedhaatii yeroo waan hin taaneef qisaasessuu dhiisnee seeraan itti itti fayyadamuun qabna.
Uummata Jaalatamoo Ijoollee keenya Afuuraa
Biyyi keenya Itiyoophiyaan qabeenyi uumamaa guutamee kan isheedhaaf kenname biyya dinqii fi bareedduudha.
Biyya jannata lafa irraa taate kana keessaa teenyee waa’ee hiyyummaa odeessuun akka hafuuf lammiin Itiyoophiyaa kam iyyuu irratti walfuruu qaba. Keessattuu dargaggoonni kana hubachuudhaan aadaa yeroodhaan hojjetee jijjiiramuu horachuu qaba. Hanqina jiru kana yeroo hubannuu fi hojiidhaan yeroo wal’aansoo qabnu hiyyummaa hundee isaa irraa balleessina.
Kanaafuu hawaasni keenyi hundii fi keessattuu dargaggoonni yeroo waggaa haaraa simatu waggaa haaraa sagantaa haaromsa biyya keenyaa wajjin walqabsiisee ciminaan hojjechuun walqabatee akka hojjetu ergaa abbummaa keenya dabarsina. Waggaa gaarii nuuf haa taassisu. Waaqayyo isin haa eebbisu; isin haa qulqulleessu. Ameen!
Abbaa Maatiyaas I
Paatriyaarikii dursaa Phaaphaasota Itiyoophiyaa
Dursaa Phaaphaasii Aksum Icaggee teessoo Takla haaymaanot
Fuulbaana 1 bara 2008
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2015-09-10 05:05:032018-10-26 09:21:19Qulqulluu Paatriyaarikii Abbaan keenya Maatiyaas I Waggaa haaraa ilaalchisee Baga ittiin isin gahe jechuun Sagalee Eebbaa kennan
Falaasama Humnaa Isa Haaraa Maaliif Adii Uffanna?